भाडामा मनोमानी रोकौ::Online News Portal from State No. 4
भाडामा मनोमानी रोकौ
पेट्रोलियम पदार्थको बेला–बेलामा मुल्य बृद्धि भैरहँदा यातायात क्षेत्रको भाडा नबढेको भन्दै दशैंका बेला यातायात व्यवसायीहरुले अत्तो थापेपछि नेपाल सरकारले यातायात क्षेत्रको भाडा १० प्रतिशतले बृद्धि ग¥यो । सरकारले बृद्धि गरे अनुसारनै यातायात व्यवसायीहरुले तत्काल सार्वजनिक यातायातमा लिँदै आएको भाडादरमा बृद्धि गरे । सरकारले दश प्रतिशत मात्रै भाडा दर बृद्धि गरेको भएपनि लामो तथा छोटो दुरीका सवारी साधनले लिने भडामा भने फरक देखीयो । लामो दुरीका सवारी साधनले साविकको भाडादरमा दश प्रतिशत मात्रै बृद्धि गरेको भएपनि स्थानीय स्तरमा चल्ने सवारी साधनले भने मनोमानी रुपमा भाडा बढाए । बागलुङदेखी कुश्मा र बेनीका लागि चल्ने सार्वजनिक यातायातले २५ प्रतिशतसम्म भाडा बृद्धि गरेर यात्रुहरुबाट असुलिरहेका छन् । पक्कि सडकमा चल्ने सवारी साधनमा भएको भाडा बृद्धि नगन्य रुपमा देखीएको भएपनि कच्चि सडकमा चल्ने सवारी साधनले भने भाडा बृद्धिको बहानमा महंगो भाडा लिईरहेका छन् ।
जिल्लाका कयौं कच्चि सडकमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायात तथा निजी व्यक्ति तथा कम्पनीहरुले सञ्चालन गर्ने यातायातका साधनहरुले लिने भडा दर कहालीलाग्दो अवस्थामा रहेको छ । बागलुङमै रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयको नेतृत्वमा अनुमति पाएका सडकहरुको भाडा दर निर्धारण भएको भएपनि सोही अनुसारको भाडा लागु भएको पाईएको छैन् । जिल्ला सदरमुकामबाट ८ किलोमिटरको दुरी पनि नपुग्ने पञ्चकोट जाने बाटो पक्कि छ । यस क्षेत्रमा सार्वजनिक बस सेवा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन् । बस सेवा नभएका कारण पञ्चकोट घुम्न आउने पर्यटकहरुले बागलुङमा सञ्चालनमा रहेका ट्याक्सीहरुको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । तर यस रुडमा भाडामा चल्ने ट्याक्सीहरुले बागलुङ बजारदेखी पोखरा पुग्ने भन्दा धेरै भाडा असुल्ने गरेका गुनासोहरु आउने गरेका छन् । बागलुङ बजारदेखी पञ्चकोटसम्म रहेको पक्कि बाटोमा एकतर्फी यात्रा गर्दा २ हजार ५ सयसम्म भडा तिरेको यात्रुहरुको गुनासो कस्ले सुन्ने । रुड प्रमिट नभएका सडकहरुमा यातायातका साधन निर्वाध चलिरहेका भएपनि भाडा दर तोकिएको छैन् । सरकारी निकायले भाडादर नतोकेका कारणले नै जिल्लाका कच्चि सडकमा चल्ने यातायातका साधनहरुले आँफुखुसी भाडा लिँदै आएका थिए ।
बेला–बेलामा यात्रुहरुबाट उठ्ने प्रश्नमा व्यवसायीहरुले रुड प्रमिट नभएको बाटो भएकाले सरकारी नियम नलाग्ने बताएर भाडा असुल्ने गरेको भएपनि सम्बन्धित सरोकारवालाले भने कुनैपनि कारवाही गरेको पाईंदैन् । तर पछिल्लो समय सरकारले बढाएको भाडा दरमा कच्चि र रुड प्रमिट नभएका सडकमा गुड्ने सावरीका साधनहरुलाई मनोमानी भाडा बढाउन फेरी कस्ले अनुमति दिएको हो । जिल्लाका बिभिन्न सडकहरुमा गुड्ने सवारीहरुको मनोमानी कायम रहेको भएपनि सरोकारवाला निकाय यातायात व्यवस्था कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय निकायहरु भने मौन किन ? सडक बनेर सवारी चलेपछि यात्रा गर्नु यात्रुहरुको गल्ती होईन् । बिभिन्न बहानामा नदिईएको रुड प्रमिटको बिषयमा सर्वसाधरण जानकार छैनन् । त्यसैले सबै सडकहरुमा चल्ने सवारीको बैज्ञानिक भाडादर कायम गराई उल्लंघन गर्ने सावारी साधनहरुलाई कारवाही गर्न सम्बन्धित निकायले चासो देखाउनु आवश्यक छ ।
लोमान्थाङको उदाहरणीय काम